Miaramila ara-tontolo iainana Microfiber Suede hoditra ho an'ny seza
Ny lamba any anaty fiara dia manana fepetra henjana kokoa amin'ny resaka anti-foulure, retardant flame, anti-static, mahatohitra ny masoandro, mora diovina, sns. Eo amin'ny seza, ny familiana sy ny faritra hafa mifandraika amin'ny vatan'olombelona dia mitaky fampiononana sy hatsarana ary faharetana.
Ity fitaovana ity dia manana fahatsapana kilasy izay tsy ambany noho ny hoditra, fa koa manana coefficient ny friksi izay tsy mitovy amin'ny hoditra. Rehefa ampiasaina eo amin'ny seza dia afaka manakana ny vatan'ny mpamily tsy hidina amin'ny seza io rehefa mitondra fiara mahery setra, manome ny mpamily traikefa mitondra fiara tsara kokoa, miaraka amin'izay koa, io karazana fitaovana io dia misy koa ny fanoherana mahery vaika ary tsy mahazaka afo, toy ny fanimbana tsy fanahy iniana, ity fitaovana ity saika tsy misy fambara fahanterana, ity fitaovana ity amin'ny hafanan'ny ririnina sy ny fahavaratra mangatsiaka miaraka amin'izay maivana kokoa.
Raha ampitahaina amin'ny lamba tsotra na lamba vita amin'ny hoditra, dia feno kokoa ny loko, ny fahatsapana ho avo lenta, manana fikitika malefaka sy malefaka kokoa, manasongadina kokoa ny fahatsapana haitraitra, ankoatry ny faharetan'ny fitaovana fanoloana alcantara noho ny hoditra, coefficient ambony an'ny friksi. , indrindra mety ampiasaina amin'ny seza, ny fampiasana isan'andro dia tsy hiseho ho reraka sy triatra. Na dia indraindray aza miaraka amin'ny fifandraisana amin'ny metaly dia mbola mamirapiratra toy ny vaovao. Ny fanoherana ny tasy dia matanjaka tokoa (miaraka amina tatatra moramora afaka mamafa ny kafe na ranom-boankazo), ny fahombiazan'ny fanoherana ny afo dia tsara kokoa noho ny hoditra voajanahary.
1. Kitapo malefaka, firafitra mihaja.
2. Fifadian-kanina mafy loko, tsy mora levona, miaraka amin'ny loko marefo isan-karazany.
3. Mahazo miaina tsara sy manadio fikarakarana mora.
4. Mety amin'ny vokatra sy fampiasana isan-karazany, toy ny tafo fiara, seza fiara, familiana fiara, sns.
5. Manana ny fiasan'ny mafana amin'ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra.
6. Vokatra miorina amin'ny rano, hanatratrarana tena tsy manimba ny fahasalaman'ny olombelona.
Teo aloha: Hydrolisis tahan'ny tantera-drano Suede PU synthetic Microfiber hoditra
Manaraka: Tsara kalitao Auto Suede lamba PU Microfiber hoditra
Fax Suede hoditra
Suede Material ho an'ny headliner fiara
Volo vita amin'ny vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny PVC vita amin'ny vita amin'ny hoditra vita amin'ny vita amin'ny ...
54/55 mirefy PVC hoditra synthetic ho an'ny fiara ...
Nonwoven Microfiber Suede Eco Synthetic hoditra ...